Mmanụ Mkpọcha Ọcha Bathroom Sink Poset
Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ / WOWOW-Mmanụ Takpechara Ọcha Na-asa Ahụ Ebe athlọ Mmiri Na-atụchasị
WOWOW-Mmanụ Rubrọ Na-ete mmanụ Banyere Ebe ịsa Ahụ Sink Faucet
gosiri 4.81 nke 5 dabeere na 16 ahịa Fim
(16 ahịa reviews)
Ndozi Mmiri nke Mfe
Na-egosi njiri mara dị mfe, pọpụpọ mmiri ahụ, ọ na-enye gị ohere idozi olu olu na mmiri yana ụzọ obe ya abụọ.
Osimiri agbasara maka nhicha ụbọchị niile
D na-ebuga ihe ruru galọn 1.5 n’otu nkeji, mmiri ịsa ahụ na-eme ka mmiri na-aga n’ihu, na-eme ka ọ dị mma maka ihicha ụbọchị niile. The spout n'ịdị elu, na-enye gị zuru ezu n'okpuru n'okpuru spout.
Ntụziaka nwụnye 2320300ORB
Site na 4 to16 anụ ọhịa sara mbara ịsa ahụ ụlọ mmiri 2320300ORB na ntinye oghere 3, ebe dị anya na-agbaso kpọmkwem ihe ị chọrọ.
Okomoko ndi pere mpe n’ime akwa ojii dị ọcha, ihe pụrụ iche dị elu ga - adị mma maka imepụta ụlọ ịke mara mma nke ọhụụ.
Itslọ na-adaba n'ụlọ, ogige ọhụrụ, ebe obibi, ụlọ moto, ụlọ na-adọkpụ njem na iji ezinụlọ.
Aka dị larịị na imepụta ergonomics, nha kwesịrị ekwesị maka njikwa, dị mma ịtụgharị.
Nwere ike iji ya na obere mgbali ma n'ụzọ dị mfe.
Ọnọdụ mmiri: iyi
Njirimara nke Mmiri: Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
Nchịkwa mmiri: Mpekere 0.5 dịkarịa ala, mmanya mgbochi 1.0 ka akwadoro
Ogo A Na-adịgide Adịgide:
Isi ihe dị na: Nnukwu Brass Construction
Valve: Crammic Disc Cartridge
Ihe aka: Zinc-Alloy
Emechaa: Bronze mmanụ etere mmanụ
Dị nwụnye: Enwegoro n’elu
Number nke Ogha Achọrọ: 3
Oke akwa Max: 1.38 ″
Okpomoku di omimi na mmiri oyi bu nke nwere ike iwepu, i nwere ike ijikwa aka ya n’uzo uzo obula ichoro.
Onye Nkwado pụrụ iche
Onye nrụpụta ọrụ dị elu nwere ike ịnye nsụzụ dị mma, nwere ike ịchekwa karịa mmiri 50%.
Onye na-eme ngagharị pụrụ iche, ị nwere ike ihicha ma ọ bụ dochie ya ngwa ngwa.
Ọ dị mfe ịchịkwa oke mmiri na oke okpomọkụ.
Ihe atụgharị-ogo 360 maka iji ya adaba.
Nhazi Jikọọ Ngwa ngwa
Ihe okike mbụ jikọrọ ngwa ngwa.
Mfe ịwụnye onwe gị n’enweghị eriri ọkpọ.
A na - emechi njikọta ahụ nke ọma site na usoro, enweghị mgbapụta.
Ihe Onwunwe Brass
Ngwongwo ọla siri ike karịa igwe ndị ọzọ
Enweghị mkpa ichegbu onwe gị banyere nsogbu nke nchara.
Ngwa dị elu, ịdị mfe nke mmezi, nnukwu nkwụsi ike, ogologo ndụ.
SKU: 2320300ORB Categories: Ime ụlọ ịsa ahụ, Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ Tags: igwe na-agwakọta, atọ onu, Aka abuo
12.5 x 10.1 x 3 sentimita
Gburugburu ebe niile
16 reviews maka WOWOW-Mmanụ Rubrọ Na-ete mmanụ Banyere Ebe ịsa Ahụ Sink Faucet
Enwere m ntakịrị obi ịzụta ihe a n'ihi ọnụahịa dị ala. M mgbe niile zụrụ ndị a ụdị faucets si Home Mmelite na-echekwa na ugwo dịkarịa ala $ 300 + maka onye ọ bụla n'ime ha. Mgbe ị wụnye onye a n'ime ụlọ ịsa ahụ m nwere mmasị na ya, enwere m mmasị na ya. All njikọ ndị nke ọla na niile gaskets e mere nke ọma. Metal imecha yiri ka na-mere nke ọma. Ingwụnye dị nnọọ mfe.
M nyere iwu ndị a n'ihi na ha yiri ụfọdụ na Home Depot na Lowe's maka ọkara ego. M hụrụ n'anya n'ezie ka ha si ele anya ozugbo arụnyere.
Jiri nke a na ime ụlọ ntụ ntụ. Nnọọ obi ụtọ, karịsịa maka ụgwọ a kwụrụ. Abata n’enweghị nsogbu. Styledị dị mma, dabara ma mechaa. Igwe mmiri ahụ na-enwe mmetụta dị nro nke mara mma nke mere ka m jụọ ajụjụ, mana ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu. Igwe ọkụ / oyi na-ekpo ọkụ na-atụgharị nke ọma ma na-arụ ọrụ nke ọma. Ihe ntinye na njikọta ngwa ngwa mere ka ịwụnye ya ikuku. Ọ bụghị 100% ijide n’aka na m ga-etinye nke a ka ọ bụrụ nnukwu ọrụ, na-achọ gburugburu ebe obibi mana ịmata ihe m maara, aga m azụta ihe a ọzọ.
Ọmarịcha ngwụcha nke yiri ka ọ dịgide. Ejiri na-eche ihe siri ike ma ọ na-ahụ ebe ọ bụla na ime ụlọ. Ezigbo uru, karịsịa maka ebe niile. Dị ọcha wụnye n'ime ọhụrụ efu top. Rịba ama igbapu na-agbapụta elu / ala site na ịkwanye na nkwụsị ma ọ bụghị site na ịkwanye / adọta na mmanya. Akụkụ a masịrị m n'ihi na ọ na-adị ọcha maka pọmpụ ahụ.
Maka ọnụahịa nke ọkpọkọ mmiri a, enwere m ezigbo obi ụtọ na nzụta anyị. Di m tinyere ya na tebụl anyị tupu anyị arụnye kabinet ka nrụnye dị mfe. Ọ nwere karịa nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-ele ya anya, mana ọ masịrị m. Ejikwa ya nke ọma nke m hụrụ n'anya ịhụ na ọ nweghị ihe ga-ọkọ.
M zụtara abụọ ndị a na uru maka ndị na-eri dị ukwuu. Ọdụ mmiri siri ike ma sie ike nke ọma. Njikọ ndị ahụ dị mma ma enwebeghị m nsogbu na ịkụ mmiri. Ọ dị mfe ịwụnye, dị mma ma dịkwa mfe ihicha. Aga m akwado ya.
Obi dị m ezigbo ụtọ na ọkpọkọ mmiri a. Achọrọ m imelite ụlọ ịsa ahụ anyị ma nwee obere ego. M hụrụ n'anya nke a ma ndị ọzọ yiri bụ $ 100 +. Zụtara nke a na nzube nke dabeere na nyocha ndị ọzọ dị mma ma nwee obi ụtọ na m mere. Achọrọ m ịzụta ọzọ maka ime ụlọ ịwụ ahụ ọzọ!
Kpamkpam pụtara ọkpọkọ. Super dị mfe iji wụnye. Oge a na sleek. Arọ na nke ọma mere. Ga-azụta ngwaahịa ha ọzọ!
Ana m arụ ọrụ banyere otu pọmpụ nke na-ekweghị ka mmiri gafee. M zụtara a maka gburugburu nozulu na ihe dị iche bụ ịtụnanya. Ọ bụ ntinye dị mfe ma ọ dị ka ihe dị egwu yana ọ na-arụ ọrụ nke ọma na nke dị oke ọnụ nke m gbanwere. Ukwuu na-atụ aro!
Ezigbo ịhụnanya! Ihe ọ bụla dị ka nke a na ụlọ ahịa bụ 150 $ ma ọ bụ karịa ma ọ bịaghị na drain, nke a dị ịtụnanya na ime ụlọ ịwụ m! Kwesịrị penny ọ bụla
Ezigbo ọkpọkọ! Ọ bịara na ihe niile iji wụnye, gụnyere 1/2 ruo 3/8 mkpakọ kwesịrị ekwesị hoses banyere 15 sentimita asatọ ogologo. Oge mbụ achọghị m ịga ụlọ ahịa nweta ọtụtụ akụkụ!
Enweghị m mmasị ịkwụ otu narị dollar maka ime ụlọ ịwụ ma ana m achọ nke mara mma.
Maka $ 80 otu a dị mma karịa ka m tụrụ anya ya .. Ọ dị oke ọnụ, na-arụ ọrụ dị ukwuu, nwee obi ụtọ na m weere ohere ahụ
Ego atumatu uzo maka ime ulo oru, imewe nke oge a, ihe eji eme ihe na nke no na ya anaghi agbapu.
M *** l2020-08-18
Kpamkpam hụrụ ihe ọkụkụ ndị a n'anya! Dị otú ahụ bara uru dị ukwuu maka ego. Ya mere mfe ịwụnye dị ka nke ọma! Enweghị ike ịgahie na ihe ndị a.
Enwere m mmasị n'ọdịdị nke pọmpụ ahụ, ọ dị m obere ka ọ dị m mma. Easy iji wụnye dị nnọọ ka ya bụrụ na ọ bụ obere ibu. Ma ruru ego ahụ.
Nke a foset ese ịtụnanya na ime ụlọ ịwụ m. Ga-enye iwu 2 ọzọ maka ụlọ ịsa ahụ ọbịa m !!
WOWOW Bathroom Faucet Single Lever Na Mmanụ rubbe ...
WOWOW Matte Black-Handle Woolu Batroo ...